को थिए प्रकाश दाहाल ? - NepalPatra.com
को थिए प्रकाश दाहाल ?
प्रकाश दाहालको जीवनी
27775 पटक पढिएको
प्रकाश दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र सीता दाहालका एकमात्र छोरा थिए । उनले आफ्ना बुबा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदाँ वा नहुदाँ स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
प्रकाश दाहालको जन्म २०३८ असार १७ गते चितवनमा भएको हो । प्रकाश बुवाआमासँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला भूमिगत भएकोले पढ्न पाएका थिएनन् ।
प्रकाशका दुई श्रीमती र दुई छोरा छन्। उनका नजिकका साथीहरुको अनुसार प्रकाश खराव मान्छे नभएपनि उनको वैबाहिक जीवनमा उतार–चढाव आउनु दुःखद पक्ष थियो ।
प्रकाशले औपचारिक रुपमा कलेजको अध्ययन गरेनन् तथा गर्न पनि पाएनन् । उनले बुबाआमा नै राजनीतिमा लागेर भूमिगत भएपछि कहिले काठमाडौं, कहिले दिल्ली त कहिले कहाँ गइरहनुपर्ने भएकाले एकै ठाउँ बसेर स्कुल कलेज जाने वातावरण नै पाएनन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाहिरी रुपमा प्रकाश कतिपय विवादमा तानिएतापनि उनीलाई भित्रबाट चिन्नेहरु उनी खराब मानिस नभई सफा मन भएका इमान्दार र सोझा थिए भन्छन । उनका नजिकका साथीहरु सोझोपनका कारण उनलाई अरुले बिगारेका थिए भन्छन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल व्यक्तिगत रुपमा असल मान्छे रहेको बताएका छन् ।
रुचि र क्षमता
प्रकाश दाहाल प्राविधिक क्षेत्रमा भने अति नै रुचि राख्थे र जानकारी पनि राख्थे । सुरुमा पार्टीको हेक्वार्टरमा उनले कम्युटर सम्बन्धी काममा प्रचण्डलाई ठूलो साथ दिए । नयाँ नयाँ अत्याधुनिक हतियारहरु देखेपछि त्यो सिकिहाल्नुपर्ने उनको स्वभाव थियो । हरेक प्राविधिक विषयहरु उनी जान्न चाहन्थे र चाँडै सिकिहाल्थे । भूमिगत कालमा माओवादी नेताहरुले स्याटेलाइट फोन बोक्ने गरेका थिए ।
दाहालले समाजसेवीलाई दिइने प्रवल जनसेवाश्री पदक पाएका थिए । तर, उनको उक्त पदक लिन अस्वीकार गरिदिए ।
प्रकाशका दुई श्रीमती भएकोले बहुविवाहलाई लिएर उनको आलोचना हुने गरेको थियो। सगरमाथा आरोहणका लागि ५ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले उनलाई २ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि प्रकाशले सरकारी रकम नलिने सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका थिए।
सोच र चाहना
माओवादीभित्र प्रचण्ड र बाबुरामवीचको अन्तरविरोध अहिलेमात्रै नभएर भूमिगत कालमा पनि बढ्ने गथ्र्यो । दुई नेतावीच अन्तरविरोध हुँदा प्रचण्ड र बाबुरामलाई मिलाउने भूमिकामा धेरै पटक निभाएका थिए ।
पछिल्लो समय बाबुराम र प्रचण्डवीचको अन्तरविरोध चुलिँदै गएपछि स्वाभाविक रुपमा केही दुरी अवश्यै बढेकोले यो मिलाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेका थिए । बाबुराम र प्रचण्ड एकै ठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने धारणा थियो ।
अलविदा प्रकाश !